ဗုဒ္ဒဘာသာကို ဆော်ကားတာလား Akon | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဗုဒ္ဒဘာသာကို ဆော်ကားတာလား Akon
ဗုဒ္ဒဘာသာကို ဆော်ကားတာလား Akon
Posted by chitkay on Jul 15, 2010 in Myanma News, News, U.S. News, World News | 20 comments
myosithu minn has written 26 post in this Website..
View all posts by chitkay →
ဘာသာရေးအနေနဲ့ မလုပ်သင့်ပါဘူး သူကတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်နေတော့ ပိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာသိက္ခာကျတာပေါ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တရားစွဲစေချင်တယ် ဘာသာတစ်ခုကို စော်ကားရင် ဒီဘာသာကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာပါ နားလည်သူတွေ လုပ်စေချင်ပါတယ်…။
ဘော်ဒါရေ zeitgeistguy ဆိုတဲ့လူ ငါ့ဆီမှာ comment လာပေးသွားတယ်ကွာ ။ မင်းကိုရော အစိုးရဘက်ကလူဘာညာလာမပြောဘူးလား ။ ငါတို့ဒီလို post တွေတင်တယ်ဆိုတာကလည်း ဘာသာရေးစော်ကားမှုကိုကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လို့ တင်လိုက်ရတာ ။
(p.s// မင်းဒီပိုစ့်မတင်ခင် 5မိနစ်လောက်အလိုက ကိုယ်လည်း အကြောင်းရာတူ ပိုစ့်တင်လိုက်တုန်းရလာတဲ့ Comment တစ်ခုအကြောင်းပြောပြတာ ။ )
ဟိုတလောက သိရိလကာင်္အစိုးရက ဖျော်ဖြေရေးလာမယ့် Stupid Akon ကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို သူများဘာသာမစော်ကားတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကောင်းတယ် ဗီဇာ ပိတ်တာ။ သူလုပ်တာ သည်းခံစိတ်တွေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေလို့ ဘာမှ ထူးခြား မခံရတာ မူစလင် ဆိုလို့ကတော့ ဒီကောင် လည်လှီးခံရဖို့ များနေပြီ။
ရေကူးကန်ထိပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော်ကိုထားတာကိုက စော်ကားနေတာပါ။
ဒါ မြင့်မြတ်သော ဗုဒ္ဒရဲ့တရားအတိုင်းပါခင်ဗျာ။
ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကို စိမ်ပြေနပြေ သတ်ချင်တယ်
အေးလေ အရင်းအမြစ်ကိုလိုက်ရှာရင် ဒီဘုရားကို ဘယ်သူကထုပေးတာလဲ၊ဘယ်လူကရောင်းစားထားလဲ၊ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေ နဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့
စိတ်ဆိုးတာပေါ့ နားလည်ပါတယ် ..။ကျွန်တော်အမေရိကန်တယောက် အိမ်မှာကျောက်ဆင်းထုတပါးကိုတွေ့ရတော့အံ့သြသွားတာပေါ့ သူကပြောပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဖီလိုဆောဖီတွေ သူကြိုက်ပါတယ်တဲ့ ဒါကြောင့်အိမ်မှာရှိနေတာလို့ဖြေပါတယ် သေချာလေ့လာကြည်တော့ သုတေသန နဲ့ဘူမိဗေဒ ကရောင်းတဲ့ တံဆိပ် ကို ဘုရားရဲ့ကိုယ်မှာတွေ လိုက်ရတော့ ဆက် မေးမနေဘဲအဖြေ ရသွားပါတော့တယ် …ဗုဒ္ဓဘာသာ ခံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေလဲ ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော် တွေကိုရက်ရက်စက် စက် အလှ ပြသဘောနဲ့ရောင်းဖို့၊ အဟောင်းပုံစံ မဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မီးမှိူင်းတိုက် မြေကြီးနဲ့ ပေအောင် လုပ်ပြီး ရေးဟောင်းအဖြစ်ရောင်းနေ တာတွေသိနေရတယ်…။ဘုရားဟောတရားအတိုင်း ကံ၊ကံ၏အကျိုးပြုသူတွေတိုင်းရရှိမှာ မ လွဲ……..ဆိုတော့ရောင်းသူမှာအပြစ်ရှိလား?ဝယ်သူဟာ အပြစ်၇ှိလားစဉ်းစားစရာတ ခုနော်…………..။
သူ့အကြောင်းကို ကိုယ့်အကြောင်း မလုပ်ကြပါနဲ့ 
ဘာသာရေးဆိုတာ ခွဲခြား မပြောသင့်ပါဘူး….. ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို ယယဆိုင်ရာတစ်ခုစီမှာ .. ယုံကြည်တဲ့ ဘုရားရှင် ဆိုတာ ရှိပါတယ်…… သူ မပြောနဲ့ မြန်မာစစ်စစ်တောင်.. တရားနားမလည်သူ ရှိတယ်…. သူစော်ကား ..သူခံရမှာပါ …အစ်ကို အစ်မ တို့ … စာတင်ပြီး.. မပြောပါနဲ့ …. …အကုသိုလ် ..ဖြစ်မယ် …
This is an example of another major misunderstanding between the millions of people of the East and the West regarding the general interpretation of Buddhism and the identity of Buddha(Gautama).
The East interprets Buddha asasupreme being possessing supernatural powers at least like superman or batman. Buddha is supreme to Buddhist is like the Trinity is supreme to the Christians.
The West interprets Buddha asaregular human who promotes great philosophy and peace. The West does not believe that Gautama possessed supernatural powers.
(This isahuge gap in understanding between these two interpretations.)
The East interprets Buddhism asareligion and considers Buddha asagodly figure. When Buddhism is treated asareligion, there are elements like Karma which addresses past life, next life, consequences, etc. which have serious meanings to many believers of Buddhism. In order words, Buddhism isaserious business for believers.
The West’s interpretation and understanding of Buddhism is mainly attributed by Dalai Lama. He simplified traditional Buddhism for easier consumption by his supporters in the West. His teachings have political undertone. He preaches and associates Buddhism with peace to sell and promote his political agenda to politicians and media in the West. He has been spreading and selling this simplified version of the identity of the Buddhism for many decades now. Most in the West simply does not see Buddhism asareligion, but ratheragreat philosophy and fun to understand.
The words like enlightenment, Nirvana, Karma, Buddhism, Buddha have different meanings to different people. If you areaBuddhist, those words have serious and holy meanings. But for non-believers, those words have less serious meanings. The non-believers associate words like Buddha with peace, Nirvana with ultimate fun, etc. Because the concepts are so complex to describe and to understand, it is easier to simplify by associating with something you are already familiar.
It is my genuine belief that AKON does not mean or intend to insult Buddhism. He is trying to associate his music with party and fun. He does it by associating with girls, Buddha, etc . with ultimate fun. He is not the first one and this is not the first incident of associating the symbols of Buddhism with fun. There are numerous bars and restaurants with Buddha statues. There are bikinis printed with Buddha’s image. It is important to see the big picture and the patterns of the issue instead of feeling insulted and feeling upset for every incident. It is important to understand the root cause of the problem, instead of focusing mainly on the symptoms. It is important to be aware of this culture of differences in interpretation of complex concepts. Buddhism hasamagnitude of concepts, as I understand, which are complex and complicated. Wheneveracomplex concept is communicated to the mass of people, who are not familiar with such concepts, it is typical for people to misunderstand and misinterpret such complex concepts. If Buddhists are serious about reforming the image of Buddhism in the West, it is time for messengers like Buddhist monks to start learning English and engage in serious community outreach efforts to spread and re-educate their version of Buddhism. The damage has been done and the reform efforts will be huge.
The video of AKON can be viewed at the following link on Youtube:
ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဟာ ကိုယ်တစ်ခုခုကိုမလုပ်ခင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို လေ့လာပြီးမှလုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်း အမှားမကင်းပေမယ့် မှားခံရတဲ့လူ အဖို့ နစ်နာမှုကြီးရင်တော့ တုံပြန်မှုကိုတော့ ပြန်ခံရမှာပဲ။ ဒါကြောင့် သူကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြန်တောင်းပန်စေချင်ပါတယ်။
ဘာသာတရားဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ သူများဘာသာကို မကိုးကွယ်ရင်နေပါ။ အပုပ်မချဖို့၊ မစော်ကားဖို့ သတိပေးချင်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးစော်ကားတဲ့သူတွေကိုလဲ
ကမ္ဘာကျော်မကလို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောက်ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ သူသိရင် အရမ်းပျော်နေမှာက ကျွန်တော်ပါ။
မအေ-ိုး ကို မြင်တိုင်း သတ်ခြင်တယ်
ဘာသာတရားကိုလေစားသင့်ပါတယ်..မိုက်ရိုင်းတာမှကမ်းကုန်အောင်ပဲ..အဲဒီ က တယ့်သူတွေထဲမှာ သူ့ရဲ့အမေ နဲ့ အစ်မညီမတို့ရောပါသင့်တယ်..
Son of Buddha says:
we should kill Fucking Akon. ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရ သတ္တ၀ါတွေကို သနားကြင်နာရမယ်လေဗျာနော်…။
July 15, 2010 at 6:40 am · Reply
Winne ပြောသလိုပဲလေ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာရမယ်လေဗျာ။ ကျွန်တော်ဆို တွေ့ရင် တွေ့ချင်းပဲ ဒီကောင့်ကို သတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
လောကကြီးကမှန်လိုပါပဲ ကိုယ်ကပြုံးရင် သူပြုံးမယ်… ကိုယ်က မဲ့ရင် သူမဲ့မယ်ပေါ့ဗျာ.. တစ်နေ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် သူပြန်လည်ခံစားရပါလိမ့်မယ်…။
ပုထုဇနော ဥမ္မတကော(လူတွေအားလုံး တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရူးကြတာပါပဲ)
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ(ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ခံ) ပေါ့ဗျာ..
Nay Kha says:
တကယ်တော့ မဖြစ်သင့်တယ့် ကိစ္စပါ…..လောကမှာ ဘာသာတရားတွေကွဲနေပြီး အယူအဆ တွေ တခြားဆီ ဖြစ်နေကြပါတယ်….
ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသာကို ကိုယ်နားလည် ပေးပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို သူတို့ နာလည်ပေးမယ်ဆိုရင် တော့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ………
ကိုယ်ဘာသာကို ကိုယ့်ဟာကို အေးဆေးဆေး ကိုးကွယ်ပေါ့